ĐINH BỘ LĨNH (924, Hoa Lư - 979, Hoa Lư, 55 sano jir) - The Holy Land of Vietnam Studies
ĐINH BỘ LĨNH (924-979) (r. 968-979), oo asal ahaan la magacaabay Hinh Hogaan (丁 桓 1), ayaa ugu horreeyay Imbaraadoorkii Fiitnaam ka dib markii laga xoreeyay dalka xukunkii Boqortooyada Shiinaha Han Han, iyo sidoo kale aasaasihii muddada gaaban Dinh Dynasty waana shaqsi si weyn uga dhex muuqday aasaaskii Xornimada Vietnamese iyo midnimo siyaasadeed qarnigii 10aad. Wuu mideeyay Vietnam iyadoo laga adkaaday laba iyo toban dagaal ooge oo fallaagoobay oo noqday boqorkii ugu horreeyay ee Vietnam. Markii uu koray, waxa uu u magacaabay dalka Ồi Cồ Việt. ĐINH BỘ LĨNH sidoo kale waxaa loo yaqaanay Đinh Tiên Hoàng (丁 先 皇; macno ahaan "Đinh, imbaraadoorkii hore").
ĐINH BỘ LĨNH wuxuu ku dhashay 924 gudaha Hoa Lư (koonfurta wabiga Red River Delta, halka loo yaqaan 'Ninh Bình' maanta). Ku soo barbaaray tuulo maxalli ah intii lagu guda jiray kala-daadashada Boqortooyada Shiinaha ee Tang taas ayaa xukumaysay Vietnam qarniyo, ĐINH BỘ LĨNH wuxuu noqday hogaamiye militari maxalli ah isagoo aad u da 'yar. Laga soo bilaabo xilligan qasan, ee siyaasaddii ugu horraysay ee madax-bannaan Vietnam soo ifbaxay markii qabqable dagaal Waa hagaag ka adkaaday Xoogagga Koonfurta Han ee Dagaalkii Koowaad oo ka mid ah Webiga Bạch Đằng sanadkii 938. Haseyeeshee, ka Boqortooyada Ngô wuu tabar yaraa mana awoodin inuu si wax ku ool ah u mideeyo Vietnam. Iyadoo wajahaysa fowdadii gudaha oo ay soo saartay tartankii laba iyo toban qabqable dagaal oo loogu talagalay xukunka waddanka, iyo waliba halista dibedda ka socota Koonfurta Han, taas oo isu tirisay inay tahay dhaxalka boqortooyadii hore ee Nan Yue in koobay oo keliya ma aha koonfurta shiinaha laakiin sidoo kale Gobolka Bac Bo of waqooyiga Vietnam, ĐINH BỘ LĨNH wuxuu raadiyay istiraatiijiyad siyaasadeed lagu mideeyo Vietnamese. Markuu dhinto kan ugu dambeeya Ngô king Sannadkii 965, wuxuu la wareegay awoodda oo wuxuu aasaasay boqortooyo cusub oo caasimadeedu ahayd degmada uu ka soo jeedo Hoa Lư. Si loo xaqiijiyo sharcinimadiisa ee la xiriirta boqortooyadii hore, wuxuu guursaday haweeney ka mid ah Qoyska Ngô.2
In sannadihii ugu horreeyey ee boqornimadiisa, ĐINH BỘ LĨNH wuxuu si gaar ah taxaddar uga jiray inuu iska ilaaliyo diidmada Koonfurta Han. Sannadkii 968-kii, wuxuu qaaday tallaabada daandaansiga ah ee qaadashada cinwaanka Emperor (Hoàng Đế) isla markaana ku dhawaaqaya inuu ka madax bannaan yahay Kala wareejinta Shiinaha. Wuxuu aasaasay Dinh Dynasty oo wuxuu u yeedhay boqortooyadiisii Ồi Cồ Việt. Aragtidiisa ayaa is bedeshay, si kastaba ha noqotee, markii kuwa xoogga leh Heesta Heesta ku lifaaqan Koonfurta Han 971. Sanadkii 972, ĐINH BỘ LĨNH wuxuu isku sharraxay kan Song adoo u diraya ergo cashuur ah si uu u muujiyo halyeeyadiisa Amiirka Shiinaha. Emperor Taizu ee Heesta markii dambe la aqoonsaday Xukunka Vietnam as Giao Chỉ Quận Vương (Boqorka Giao Chi). Si fiican uga warqabo Milatariga Heesta awood, oo u hamuun qaba inuu ilaaliyo madaxbanaanida dalkiisa, ĐINH BỘ LĨNH wuxuu helay heshiis aan gardarro ahayn oo lagu beddelayo qaddarinno la siinayo Maxkamada Shiinaha saddexdii sanaba mar.
In ku darista maaraynta xiriirka Shiinaha, ĐINH BỘ LĨNH ayaa si firfircoon dib u habeyn ugu sameeyay maamulka iyo ciidamada qalabka sida Vietnam si loo xoojiyo aasaaska gobolka cusub. Wuxuu yagleelay maxkamad boqortooyo iyo kala sarayn shaqaalaha rayidka iyo militariga. ĐINH BỘ LĨNH sidoo kale wuxuu hirgaliyay nidaam cadaalad adag oo khiyaano qaran lagu ciqaabayo iyadoo lagu dhex kariyey weel saliid lagu kariyey ama lagu quudinayo shabeel la xirey, si looga hortago dhamaanba kuwa hanjabaya amarka cusub ee boqortooyada.
Dilkii Đinh Bộ Lĩnh
Hsi kastaba, Boqortooyada Đinh Bộ Lĩnh ma sii raagin. Sannadkii 979, sarkaal ka tirsan qasriga, oo u waxyooday riyo, ayaa labadaba dilay Đinh Bộ Lĩnh iyo curadkiisa Đinh Liễn iyagoo hurda barxadda guriga. Gacan ku dhiiglaha waxaa si dhaqso leh u soo qabtay oo toogtay jeneraal Nguyễn Bặc. BỘ LĨNH waxaa dhaxlay wiilkiisii ​​lix jirka ahaa ee badbaaday Dinh Phe De.
The Heesta heesta doonayay inuu ka faa'iideysto xaalada qasan ee Ồi Cồ Việt si dib loogu yagleelo Xakamaynta Shiinaha dalka oo dhan, oo wuxuu u diray ciidan duulaan ah Vietnam. Dhibaatadan, LÊ HOÀN, taliyaha guud ee Ciidanka Đinh Bộ Lĩnh, ku fuulay awoodda faaruqinta, ka xayuubiyey boqorka imbaraadooriyadii, ka takhalusay kuwii isaga ka soo horjeeday maxkamadda, wuxuuna galay xiriir aan sharci ahayn Empress Dowager Dương Vân Nga. LÊ HOÀN ayaa ka adkaaday Duulaanka heesta, ayaa is naadiyey Emperor, oo wuxuu aasaasay Horaantii Lê Dynasty. Wuu sii waday inuu wadanka ugu yeero “Ồi Cồ Việt. "
TRẦN TRỌNG KIM ayaa ku leh Việt Nam sử lược: "Có sách chép rằng Đinh Tiên-hoàng tên là Hoàn 桓, chứ không phải là Bộ Lĩnh. Bộ Lĩnh là một tước quan của Trần Lãm phong cho Đinh Hoàn. Nhưng xét trong ”Khâm-định Việt-sử” và các sách khác thì thấy chép Đinh bộ Lĩnh chứ không thấy Đinh Hoàn. Vậy nay cứ theo sách Khâm-định má chép. "Sida laga soo xigtay buugaagta qaar, originalinh Bộ Lĩnh magaciisa asalka ah waa ()))
HỮU NGỌC. Ku dhex wareegaya dhaqanka Vietnam 2004 - Bogga 393: “Nguyễn Bặc… iyo rag dowlayaal ah oo caawiyay Đinh Bộ Lĩnh ayaa soo afjaray mudadii fowdada ee laba iyo toban Dagaal ooge ka hor Boqortooyada Đinh. "
Maqaalka ku saabsan Đinh Bộ Lĩnh on Vietsciences.free.fr
(Booqday jeer 197, booqashooyinka 1 maanta)
Shirweynihii 6-aad ee Caalamiga ah ee ku saabsan barashada VIETNAMESE - Qeybta 1 →